Ny alahady 8 septambra lasa teo, mpangalatra vatoaratra ana fiara eny amin’ny faritra Anosibe sy Andavamba no hitan’ny tompona fiara nanala ny bateriany. Nifanenjehan’ny olona teny amin’ny manodidina ka tra-tehaka teny Andavamamba. Naterin’ny olona teny amin’ny paositry ny polisy Ilanivato moa ity lehilahy ity nanaovana fanadihadiana . Niaiky ny heloka nataony izy ary tsy vao izao no nangalatra fa efa mpanao izany ka eny amin’ny faritra Andavamba sy Anosibe no toerana hanaovany ny asa ratsiny. Natolotra ny fitsarana moa ilay lehilahy ary efa nidoboka am-ponja vonjimaika.
Maro amin’ireo mpitondra fiara no tsy mahita ny vatoaratra intsony rehefa hanainga. Tsy ireo fiara miantsona tontolo andro sy alina ihany fa na ireo miserana aza, indrindra ireo lasa mividy entana any an-tsenan’Anosibe. Kinga ireo faingan-tanana sady efa manana fanalahidy sy fitaovana famahana saron-dohana fiara sy bateria. Mbola jokoin’ny polisy ireo mpiray tsikombakomba amin’ity tratra ambodiomby mpangalatra kojakojana fiara ity.